मापन र मध्यम चिसो २-घटक उत्पादनहरु को मिश्रण
by डेल्टा ईन्जिनियरि। / मंगलबार, ० January जनवरी २०२० / मा प्रकाशित १-घटक प्रणालीहरू
कम से कम मध्यम चिसो २-कम्पोनेन्ट उत्पादहरूको अनुप्रयोग
हामीले DMC202 प्रणालीको लागि ईन्जिनियर गरेका छौं dosing, मिश्रण र अनुप्रयोग कम देखि मध्यम को चिसो २-घटक तरल पदार्थ, जस्तै epoxies, polyurethanes, silicones, आदि
सम्पूर्ण मेसिन PLC र टचस्क्रिनको साथ नियन्त्रण एकाई मार्फत नियन्त्रण गरिन्छ, हाम्रो मोड्युलर सीमेन्स सफ्टवेयरको साथ। यस सफ्टवेयरको साथ, मेसिनले मिटरि forको लागि5कम्पोनेन्टहरू सम्मका उत्पादनहरू नियन्त्रण गर्न सक्दछ।
DMC202 एक मोडुलर प्रणाली हो, जुन तपाइँको आवश्यकता अनुसार उत्पादन र अनुप्रयोग अनुसार समायोजन गर्न सकिन्छ! धेरै लेआउटहरू सम्भव छ, दुबै म्यानुअल र स्वचालित अनुप्रयोगहरूको लागि।
हामीले DMC202 डोजिंग मेशिनको विशेष संस्करण डिजाइन गरेका छौं भाँडो आवेदन। यो स्थापना ए संग सुसज्जित छ तालिका र खुट्टा पेडल, त्यसैले यो सजिलो छ सहि र बारम्बार भर्नुहोस् अक्सर साना इलेक्ट्रिकल कम्पोनेन्टहरू.
यदि तपाईं अधिक जानकारी चाहनुहुन्छ भने, कृपया हामीलाई उडान प्राप्त गर्न हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
तपाइँ तपाइँका ग्राहकहरु पाउनुहुन्छ सुनिश्चित उच्च गुणवत्ताका उत्पादनहरू धेरै को कारणले सटीक खुराक.
तपाईं एक संग उत्पादनहरू प्राप्त गर्नुहोस् सजातीय परिष्करण.
तपाईं अपरेटिंग समय जीत सजिलो नियन्त्रण को लागी धन्यवाद।
तपाईंको अपरेटरहरू समय र प्राप्त गर्दछन् आत्म-समर्थन टचस्क्रिनको साथ सजिलो समायोजनमा धन्यवाद।
तपाईं कम को समय र लागत of डाउनटाइम स्थापना को सजिलो मर्मत धन्यवाद।
तपाईं जोगिन को जोखिम रासायनिक असंगति स्टेनलेस स्टील दबाव जहाज प्रयोग गरेर।
सिलिकॉन छाला प्याच को उत्पादन को लागी सिलिकॉन को डोज।
पालीयुरेथेनको ढोका ढोका कोर्निकेसहरूका लागि खुला मोल्डहरूमा डस गर्दै।
पानी फिल्टरहरूको लागि प्लास्टिकको फ्रेममा झिल्ली जोड्नको लागि एक पोल्युरिथेनको अनुप्रयोग।
वातावरणीय अवस्थाको बिरूद्ध एक उच्च प्रतिरोधको लागि विद्युतीय कम्पोनेन्ट्स को Potting
पेन्ट ब्रशेसको पोटिंग।
मोल्डहरूमा सिलिकोनको कम दबाव ईन्जेक्शन।
यदि तपाईंलाई थप जानकारी आवश्यक छ वा यदि तपाईंसँग केही प्रश्न, सुझाव वा टिप्पणीहरू छन् भने, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्: